Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Mmanya & mmuo » Biodynamic Onyekwere
Na-agbasa News Travel • culinary • omenala • Akụkọ kacha ọhụrụ na France • News • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Mmanya & mmuo
Mpaghara mmanya Bordeaux nke dị na ndịda ọdịda anyanwụ France na -emepụta ụfọdụ mmanya na mkpụrụ vaịn kacha amasị n'ụwa. Ozugbo a tụlere ya dị ka ebe ọdịbendị ọdịbendị ọdịnala, Bordeaux nọ nwayọ, mana n'ụzọ dị irè, na -agbanwe usoro ọrụ ugbo ya na ịnabata usoro ọrụ ugbo na/ma ọ bụ biodynamic. Ee, ihe ịma aka na-aga n'ihu (ihu igwe iru mmiri, ala ndị buru ibu, ndị nwere ihe ize ndụ); agbanyeghị, a na -emeri okwu ndị a “biodynamically,” ndị nwe ụlọ/mmanya na -enwekwa obi ụtọ na nsonaazụ ya.
Echiche nke biodynamics malitere na 1924 mgbe onye ọkà ihe ọmụma na ọkà mmụta sayensị, Dr. Rudolf Steiner kuziri ndị ọrụ ugbo ụzọ isi jikọta sayensị na mmụọ dị n'okike. Ọ bụ ezie na echiche ahụ amalitela site n'ọrụ ndị ọrụ ugbo na ndị nyocha, nke bụ eziokwu bụ na puku kwuru puku n'ubi, ugbo, ubi vaịn, ahịhịa na ubi mkpụrụ osisi, ebe ha nabatara mmemme a, na -eme nke ọma.
Ubi vaịn ndị tozuru oke dị ka biodynamic na -enweta nnabata site na mmemme asambodo ọkọlọtọ Demeter Biodynamic guzobere na 1928 ma Demeter International na -elekọta ya n'ụwa niile. N'ime ihe karịrị ugbo 5000, na -anọchite anya ihe karịrị acres 400,000 bụ biodynamic gbaara ezi àmà na mba 60. Demeter USA na -ejikwa asambodo Biodynamic na US wee jiri ọkọlọtọ organic USDA dị ka ntọala - yana ihe ndị ọzọ chọrọ:
Demeter Biodynamic Farm Standard chọrọ ka akọwara ugbo niile, na ọbụghị naanị ihe ọkụkụ, na,
A na -agwakọta ihe ọkụkụ na anụ ụlọ, a na -emesokwa anụmanụ dịka mmadụ
A na -edobe ọmụmụ nke mbubata obere
A na -etinye nkwadebe biodynamic mgbe niile
Ọ dịkarịa ala, pasent 50 nke nri anụ ụlọ ga -etolite n'ugbo
Ọ dịkarịa ala, pasent iri nke mkpokọta ihe ubi niile a ga -ewepụta maka ihe dị ndụ
A naghị eji ihe ndị dị ndụ (GMO) eme ihe
Naanị ụfọdụ nkwadebe ihe ọkụkụ ka a na -eji alụso ụmụ ahụhụ ọgụ /ọrịa osisi
Agaghị anabata kemịkalụ na nri ala, ahịhịa ahịhịa, ọgwụ na -egbu egbu, homonụ na -eto eto na nke gbanwere mkpụrụ ndụ ihe nketa
Ugbo ga -enwerịrị ụkpụrụ nke ọrụ ọhaneze
Green dị mma
Na Bordeaux, enwere ubi vaịn 30+ ugbu a na -arụ ọrụ ugbo na/ma ọ bụ biodynamic na -agụnye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 8000+ ha (2017). Ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ala mmanya biodynamic dị n'akụkụ aka nri nke Garonne, mpaghara maka obere, ala ezinụlọ na-agba ọsọ ebe ndị nwe chateaux kwenyere na mmegharị mbara igwe na-emetụta nke ọma n'ubi vaịn ha ma gbanwee ọrụ ha na kalenda ọnwa.
Gụọ akụkọ zuru ezu na mmanya. njem.